Pirimiiyeer Liigiii Itoophiyaa torbee 12ffaan dursaan Liigichaa Bunni Itoophiyaa Maqalee 70 Andertaan 1 fi 0 mo’ame - ! - OBN
Pirimiiyeer Liigiii Itoophiyaa torbee 12ffaan dursaan Liigichaa Bunni Itoophiyaa Maqalee 70 Andertaan 1 fi 0 mo’ame
OBN Amaj,15 05 11 Piriimiyeer Liigii Itoophiyaa torbee 12ffaan taphoota sadii taphatamanin, Maqallee 70 Andertaa Buna Itoophiyaa simachun, goolii Amaanu'el G/Mikaa'el rukkuttaa peenaalitii daqiiqaa 36ffaa irratti galchen mo'ate.
Maqalee 70 Andertaa taphoota 9'n qabxii 17 walitti qabachun sadarkaa 9ffaarraa garaa 5ffaattii foyyeesse. Bunni Itoophiyaa qabxii 22 taphoota 12 irraa argachun sadarkaa 1ffaa qabateen itti fufeera.
Tapha biraatiin Bunni Sidaamaa Raayyaa Ittisaa Hawaasaattii keessumeessuun goolii 2 fi 0'n mo'ate. Addiis Giideey daqiiqaa 30 fi Mahaamad Naasiir daqiiqaa 36ffaa irrattii gooliiwwan galchaniin Bunni Sidaamaa qabxii 3 milkeeffate.
Kanaanis Bunni Sidaamaa taphoota 10 keessaa qabxii 17 argachun sadarkaa 6ffaa, Raayaan Ittisaa ammoo tapha 9'n qabxii 8 walitti qabachun sadarkaa 12ffaa irratti argama. Taphni Sihuuli Shiree fi Dirree Dhawaan gooliii malee xumuran. Taphich borus itti fufuun Istaadiyemmi Abbabaa Biqilaatti Adaamaan torbee darbe dedebit waliin 1 qixa kan bahe Yunivarsiitii Walwaaloo Adiigiraat keessumeessaa.Tapha biraatiin darbii Naannoo Amaaraatiin Bu/Mag/Baahirdaar Faasiil keessummeessa.Darbii kibbaatiin hawasaan poolisii Kibbaa waliin taphata.
283 Views 1/23/19